January 2, 2021 - Hargeele - Wararka Somali State
Arsenal oo guul raaxo leh ka soo heshay kooxda West Bromwich oo ay booqatay… +SAWIRRO
Cayaaraha January 2, 2021
(England) 03 Jan 2021. Arsenal ayaa guul raaxo leh ka soo heshay kooxda West Bromwich oo ay ku booqatay garoonkeeda The Hawthorns, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-4, ciyaartan ayaana qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-2 ay ku hor kaceysay kooxda reer London […]Sii akhriso
Real Madrid oo garoonkeeda Alfredo Di Stefano guul kaga gaartay kooxda Celta Vigo… +SAWIRRO
(Madrid) 03 Jan 2021. Real Madrid ayaa garoonkeeda Alfredo Di Stefano guul kaga gaartay kooxda Celta Vigo, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka La Liga dalka Spain. Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Real Madrid. […]Sii akhriso
“Awoodaha Paul Pogba shaki kuma jiro.” – Bruno Fernandes
(Manchester) 02 Jan 2021. Ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa difaacay saaxiibkiis Paul Pogba, isagoo xusay in qof walba uu ogyahay heerka ay gaarsiisan tahay awooda xiddiga reer France. Laacibka reer France ee Paul Pogba ayaa la kulmay dhaleeceeno badan sababa la xiriira heerkiisa ciyaareed ee kooxda iyo dhaawacyada soo Sii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Real Madrid iyo Celta Vigo ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
(Madrid) 02 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Real Madrid iyo Celta Vigo horyaalka La Liga ayaa la shaaciyey. Kooxda Real Madrid ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Celta Vigo si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka La Liga ee dalka Spain. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli […]Sii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha West Bromwich iyo Arsenal ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
(England) 02 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha West Bromwich Albion iyo Arsenal horyaalka Premier League ayaa la shaaciyey. Kooxda West Bromwich Albion ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Arsenal si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka England. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli […]Sii akhriso
5 killed, 14 wounded in suicide attack in Somali capital – Minneapolis Star Tribune
Somali News January 2, 2021
5 killed, 14 wounded in suicide attack in Somali capital Minneapolis Star TribuneSii akhriso
Koeman oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha Barcelona uga qeyb galaya kulanka Huesca… (Yaa ka maqan Yaase ku soo baxay?)
(Barcelona) 02 Jan 2021. Tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Ronald Koeman ayaa ku dhawaaqay liiska xiddigaha kooxdiisa uga qeyb galaya kulanka Huesca ee horyaalka La Liga dalka Spain. Barcelona ayaa ku booqan doonta kooxda kubadda cagta ee Huesca garoonkeeda Estadio El Alcoraz, waxaana liiska uu ku dhawaaqay macallin Ronald Koeman dib ugu soo laabtay kabtan Sii akhriso
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo soo xiray shirka Madasha Aragti Wadaaga ee Heritage “SAWIRRO”
Soomaaliya January 2, 2021
Garoowe-(SONNA)-Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo soo xiray shirka Madasha Aragti Wadaaga ee ka socday Garoowe ayaa tilmaamay in dhallinyarada Soomaaliyeed loo baahanyahay in la howlgeliyo oo la siiyo fursado hogaamineed, si dalka uu u gaaro horumar dhinac kasta leh. “Sida aad la socotaan Sii akhriso
RASMI: Paris Saint-Germain oo shaacisay inay dhameystirtay heshiiska Mauricio Pochettino
(Paris) 02 Jan 2021. Kooxda reer France ee Paris Saint-Germain ayaa maanta oo sabti ah si rasmi aah u shaacisay inay la saxiixatay tababaraha reer Argentina ee Mauricio Pochettino. Kooxda Paris ka dhisan ayaa barteeda Twitter-ka ku soo qortay: “Hello Pochettino”, maadaama uu la wareegi doono mas’uuliyadda beddelka tababaraha reer Germany ee Sii akhriso
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare oo ka hadlay marxaladaha uu dalka soo maray
Garoowe-(SONNA)-Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka hadlay Madasha Aragti Wadaaga ee Machadka Cilmi baarista Heritage ayaa ka sheekeeyay taariikhdii loo soo maray dowladnimada Soomaaliya. “2006-dii dowladdii Soomaaliya waxaa ay joogtay Baydhabo, Xamarna waxaa joogay maxkamadihii, waxaana ka soo dhaqaaqnay Baydhabo oo aan Xamar ku Sii akhriso